Sansui Steam-Spray Iron - Violet | Buy online | SHOP.COM.MM
Sansui Steam-Spray Iron - Violet
Daw May Thu
Sansui Steam-Spray Iron - Violet အော်တိုအပူ level ချိန်တာပါတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ် Read more Hide
Sansui Steam-Spray Iron - Violet ရေဖြန်းဖို့ပါတော့သပ်သပ်လုပ်စရာမလိုဘူး အကျီတွေလဲ ပြန့်တယ် Read more Hide
Thet Lin Oo
Sansui Steam-Spray Iron - Violet မီးပူက အပူအအေးကိုသူ့ဘာသူချိန်ပေးတယ် အဲ့အတွက်အရမ်းအဆင်ပြေတယ် Read more Hide
The iron isalittle big. Read more Hide
Htet Thazin Khin
စတစ်ကာတိုက်လို့ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အရည်အသွေးလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
စတစ်ကာပါတဲ့ အ၀တ်အစားတွေပါ တိုက်လို့ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်မီးပူလေးပါ။ Read more Hide
Sansui iron gets wrinkles out quickly, and the steam and spray features work well. Read more Hide
Sansui မီးပူလေးက အရည်အသွေးကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။ Read more Hide
Sansui အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ မီးပူလေးက အ၀တ်တိုက်ရအရမ်းကောင်းတယ်။ သဘောကျမိတဲ့အချက်က မီးပူကပ်လွယ်တဲ့စတစ်ကာတွေပေါ်မှာပါ တိုက်လို့ရတာပဲ။ တစ်ချို့အရမ်းကြေတဲ့အကျီတွေဆိုရင် ရေငွေ့ပေးပြီးပြန့်အောင်တိုက်လို့ရတယ်။ Read more Hide
Ironing with this iron is very good because it will reach into all the areas that will normally not be touched by other pressing irons. It will remove any trace of wrinkles from your clothes, making sure you stay clean and fresh all day. This lightweight dry pressing iron comes withawater measuring cup that help you with the right quantity of water needed for effective ironing. The non-stick coating at the base of this 1200W iron will help the electric pressing iron glide smoothly and effortlessly over different fabrics...
Specifications of Steam-Spray Iron - Violet